Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Probe Card Pin ထုတ်လုပ်သူနှင့် Probe Card Pin ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
Soar Technology Co., Ltd သုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်ခြင်း, ရောင်းချခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စေ့စပ်တဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် Probe Card Pin။ ကျနော်တို့တွင်တည်ရှိပြီး, Taiwan နှင့်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသုံးခွင့်ရှိသည်။ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအားဆက်ကပ်အပ်နှံကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများအမြဲသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဆွေးနွေးအပြည့်အဝဖောက်သည်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်ရရှိနိုင်တယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုအမျိုးအစားအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ဘီရီလီယမ်ဒြပ်စင်သည်အဓိကသတ္ထုစပ်အဖြစ်ဒြပ်စင်အဖြစ်ဘီရီလီယမ်ပါဝင်သောကြေးနီသတ္တုစပ်ဖြစ်သည်.၎င်းသည်ကြေးနီသတ္တုစပ်များတွင်အကောင်းဆုံး elastic material ဖြစ်သည်.စွမ်းအားမြင့်တယ်,မြင့်မားသော elasticity,မြင့်မားသောစီးကူး,မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ,ချေးခုခံ,အားကြီးသောပင်ပန်းနွမ်းနယ်,ခံနိုင်ရည်ရှိသည်,အအေးမိ-ခံနိုင်ရည်ရှိသည်,လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်,နှင့်ကြေးနီသတ္တုစပ်များ၏အကောင်းဆုံးခိုင်မာသောနှင့်အစွမ်းသတ္တိကို;ရှည်လျားသောများအတွက်အသင့်တော်ဆုံး-ဘဝ,မြင့်သည်-အပူချိန်,မြင့်သည်-လက်ရှိ switch ကိုအစိတ်အပိုင်းများ.ဒါဟာအသက်အရွယ်ပဲ-ပစ္စည်းခိုင်မာခြင်းနှင့် micro switch သည်,တိကျစွာ connector ကို,ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောအဖြစ်တိကျသော shrapnel များအတွက်ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုး-တန်းဆိပ်ကမ်းနှင့် relay များ.
ဘီရီလီယမ်ကိုကြေးနီသည်အရွယ်ဖြစ်သည်-ကြေးနီသတ္တုစပ်တို့တွင်အမြင့်ဆုံးသောစွမ်းအားဖြင့်မာကြောစေသောပစ္စည်း.ဒါဟာတာရှည်အတွက်အသုံးပြုသည်-ဘဝဆိပ်ကမ်း,micro ခလုတ်များ,စသည်တို့.Beryllium copper ၏မာကျောမှုနှင့် wear ခံနိုင်မှုသည်ခရိုမီယမ်၏ဂုဏ်သတ္တိများထက်ပိုကောင်းသည်-ဇာကွန်နီယမ်-ကြေးနီသတ္တုစပ်.
ဘီရီလီယမ်၏ကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကိရိယာများသည်အလွန်ခဲယဉ်းပြီးသံမဏိမျက်နှာပြင်ကိုထိသောအခါမီးပွားများထွက်လာမည်မဟုတ်ပါ.ဘာရီလီယမ်၏ flexural မာကျောမှုမြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်,အပူတည်ငြိမ်မှု,အပူစီးကူး,နှင့်သိပ်သည်းဆနိမ့်,ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လေကြောင်းလုပ်နေကြသည်-ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုလည်းဒုံးကျည်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်,အာကာသယာဉ်များနှင့်ဂြိုဟ်တုများ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.probe-needles.com/my/probe-card-pin.html
Probe Card Pin ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ Probe Card Pin ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ Probe Card Pin ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan